प्रधानमन्त्रीद्धारा राजीनामा,राजीनामा दिनुपर्ने कारण किन आयो ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
प्रधानमन्त्रीद्धारा राजीनामा,राजीनामा दिनुपर्ने कारण किन आयो ?
लेबनानका प्रधानमन्त्री साद अल हरिरीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफूलाई ज्यानको जोखिम रहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएको बीबीसीले लेखेको छ । उनले साउदी अरबबाट टेलिभिजन सम्वोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरे जसलाई अप्रत्याशित भनिएको छ ।
उनी केही दिनयता साउदी अरबको भ्रमणमा छन् । सन् २००५ मा उनका पिता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री रफिक हरिरीको हत्या भएको थियो । अहिले पनि त्यतिबेलाको जस्तै अवस्था आएको भन्दै उनले भनेका छन्, मलाई निशाना बनाउनका लागि गुपचुप तरिकाबाट योजना बनिरहेको छ ।
साद अल हरिरी गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसअघि उनी सन् २००९ देखि २०११ सम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सम्वोधनको क्रममा उनले इरान समर्थक शिया हिजबुल्लाह र इरानको आलोचना गरेका थिए । साउदी अरेबिया इरान र हिजबुल्लाहको कट्टर विरोधी देश हो ।